China STEVIOSIN ndị na-emepụta na ndị na-ebu ngwaahịa | HEX
Stevioside (CNS: 19.008; INS: 960), nke a makwaara dị ka Stevioside, bụ glycoside e wepụtara na epupụta nke Stevia Rebaudia (Stevia), ezinụlọ nke osisi na ezinụlọ ndị mejupụtara.
Stevia sugar calorific uru bụ naanị 1/300 nke sucrose, ọ naghị etinye obi gị dum mgbe ị rụsịrị ahụ nke mmadụ, ọ naghị ewepụta okpomọkụ, ọ dị mma maka ndị ọrịa mamịrị na oke ọrịa na-atọ ụtọ. Mgbe agwakọtara Stevia na sucrose fructose ma ọ bụ shuga isomerized, uto ya na uto ya ga-akawanye mma. Enwere ike iji swiiti, achịcha, ihe ọ ,ụ drinksụ, ihe ọ solidụ solidụ siri ike, nri eghe, ngwa nri, mkpụrụ osisi candi. Jiri imeru ihe n'ókè dịka mkpa mmepụta. Ekwela obi gị mgbe ị risịrị nri, emepụtaghị ike ọkụ, yabụ maka ọrịa shuga, ndị ọrịa oke ibu nke ezigbo ihe ụtọ.
Dị ka isi ihe dị na Stevia rebaudiana, steviol glycosides nwere ọgwụ bara uru na oriri bara ụba, ndị otu ọkachamara mba dị iche iche anwalela ma gbaa nchekwa ha.
Nchebe oriri nke steviol glycosides agafeela nyocha nyocha nke ndị ọgbọ. Organizationstù ndị na-achịkwa mba ụwa nile na-ewere stevia dị ka ngwaahịa nri dị mma. Ndi otu a gunyere: Kọmitii Code Food (CAC), United Nations Food and Agriculture Organisation / World Health Organisation Expert Committee on Food Additives (JECFA), European Food Safety Agency (EFSA), US Food and Drug Administration (FDA) na New Zealand Standlọ Ọrụ Nchịkwa Nri Na-ahụ Maka Nri (FSANZ).
Stevia bụ ihe na-atọ ụtọ nke ọtụtụ mmadụ maara. Ọ bụkwa ahịhịa na-adịkarị na njedebe n'etiti Paraguay na Brazil na South America. Akwụkwọ nke stevia nwere ihe na-atọ ụtọ a na-akpọ "Stevia". Stevia a nụchara anụcha bụ kristal na-enweghị ntụpọ na nke na-enweghị isi. O nwere ihe dị ụtọ okpukpu atọ nke shuga. N'ihi obere kalori, nke nwere ike ịme mmiri na mmiri ma ọ bụ mmanya na-egbu egbu, na-eguzogidekwa okpomọkụ, enwere ike ịkọwa ya dị ka ngwaahịa na-abụghị calorie na-agbanwe ngwaahịa yana ọ bụ ihe na-atọkarị ụtọ maka nri mamịrị ma ọ bụ nri nri. A na-akpọ Stevia “Kahei” (Gulani, nke pụtara “ahịhịa na-atọ ụtọ”) na Paraguay, a na-ejikwa ya atụkọtara nwunye yerba ụtọ.
Nke gara aga: White willow wepụ ntụ ntụ
Osote: Siberia Ginseng Wepụ ntụ ntụ
Herbal nessdị Mma Papaya Akwukwo wepụ
Herbal Wellness Akwụkwọ Mbipụta wepụ
Mkpụrụ osisi dị ọcha
Mkpụrụ osisi Serenity
Rhodiola Rosea Wepụ ntụ ntụ
Salvia Miltiorrhiza wepụ